ကြာသပတေးနေ့၊ ဖေဖော်ဝါရီလ 25, 2021 စနေနေ့, ဖေဖော်ဝါရီလ 27, 2021 Douglas Karr
ကျွန်ုပ်မည်သို့စတင်ရမည် လူမှုမီဒီယာ? လူမှုရေးမီဒီယာများ၏စီးပွားရေးလုပ်ငန်းအပေါ်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးကြိုးပမ်းမှုအပေါ်ကျွန်ုပ်၏အကျိုးသက်ရောက်မှုကိုပြောသောအခါဤမေးခွန်းသည်ကျွန်ုပ်ဆက်လက်ရရှိနေသောမေးခွန်းဖြစ်သည်။ ပထမ ဦး စွာသင်၏ကုမ္ပဏီသည်လူမှုမီဒီယာတွင်တက်ကြွစွာပါဝင်လိုသည့်အကြောင်းရင်းကိုဆွေးနွေးကြပါစို့။
သင်၏လူမှုမီဒီယာစျေးကွက်ရှာဖွေရေးသည်စီးပွားရေးရလာဒ်များကိုဖော်ဆောင်နိုင်သောနည်းလမ်း (၇) ခုနှင့်ပတ်သက်ပြီးအလွန်ရှင်းလင်းသောဗွီဒီယိုတစ်ခုဖြစ်သည်။
သင်၏လူမှုကွန်ယက်ကိုရွေးချယ်ပါ - လူမှုမီဒီယာပလက်ဖောင်းတစ်ခုချင်းစီမှထူးခြားသောလုပ်ငန်းအဖွဲ့များနှင့်ဖောက်သည်များကိုရှာဖွေပါ။ ငါကရိုးရိုးလေးရွေးတာနဲ့နောက်တစ်ခုကိုလျစ်လျူရှုတာမျိုးမလုပ်ချင်ဘူး။ သင်ပလက်ဖောင်းအားလုံးတွင်ပါ ၀ င်နိုင်သည်ဟုကျွန်ုပ်ယုံကြည်သည်။ သို့သော်အခွင့်အရေးများစတင်လာသည့်နေရာတွင်အာရုံစိုက်ပြီးပစ်မှတ်ထားပါ။ ဒါကအက္ခရာစဉ်တစ်ခုစီရဲ့လူ ဦး ရေစာရင်းအကြောင်းမဟုတ်ပါဘူး။
သင့်ရဲ့ကိုယ်ရေးအချက်အလက်ကိုဖြည့်ပါ - ယေဘူယျပရိုဖိုင်းဓာတ်ပုံ၊ နောက်ခံပျောက်ဆုံးမှုသို့မဟုတ်မပြည့်စုံသောပရိုဖိုင်းတစ်ခုကိုကျွန်ုပ်တွေ့သောအခါကျွန်ုပ်သည်ကုမ္ပဏီသို့မဟုတ်လူပုဂ္ဂိုလ်နှင့်ဆိုရှယ်မီဒီယာတွင်ပါ ၀ င်ရန်တွန့်ဆုတ်နေပါသည်။ သင်၏အချိန်ကိုတည်ဆောက်ခြင်းနှင့်ထိုတွင်ရှိနေခြင်းအတွက်သင်၏ရည်ရွယ်ချက်ကိုပြသသောထူးခြားသော၊ ရှင်းလင်းပြတ်သားသောပရိုဖိုင်းကိုပေးရန်အချိန်ယူပါ။
သင်၏အသံနှင့်အသံကိုရှာပါ - ကုန်အမှတ်တံဆိပ်၏ရှေ့နောက်ညီညွတ်မှုသည်အွန်လိုင်းတွင်အရေးကြီးသည်၊ ထို့ကြောင့်ဆိုရှယ်မီဒီယာတွင်မျှဝေခြင်းနှင့်တုန့်ပြန်ခြင်းပြုလုပ်ရာတွင်သင်တသမတ်တည်းကျသောအသံကိုမြဲမြံအောင်ပြုလုပ်ပါ။ စိတ်ရှုပ်စရာကောင်းသည်မှာ၎င်းသည်အလုပ်များကျယ်။ ကျယ်သောကမ္ဘာကြီးဖြစ်ကြောင်း၊ စိတ်မ ၀ င်စားပါနှင့်!
Visuals ထည့်သွင်းပါ - ရုပ်ပုံများနှင့်ဗွီဒီယိုများသည်သင်၏လူမှုမီဒီယာအသစ်ပြောင်းခြင်းများ၏ထိတွေ့ဆက်ဆံမှုနှင့်မျှဝေမှုကိုများစွာအကျိုးသက်ရောက်သည်။ ဓာတ်ပုံများရိုက်ကူးပါ၊ ဗီဒီယိုထည့်ပါ၊ အချိန်နှင့်တပြေးညီဗီဒီယိုအပိုင်းများကိုစီစဉ်ပါ။ သင်လုပ်ဆောင်လိုသောပလက်ဖောင်းတစ်ခုလုံးကိုအပြည့်အ ၀ အသုံးချနိုင်ရန်အွန်လိုင်းပုံပြင်များတွင်ဗွီဒီယိုတိုတိုအချို့ကိုမျှဝေပါ။
သင်၏ပို့စ်မဟာဗျူဟာကိုရွေးချယ်ပါ - ကျွန်ုပ်တို့သည်မကြာသေးမီ၊ မကြာခဏနှင့်သက်ဆိုင်မှုရှိခြင်းမှာကျွန်ုပ်တို့၏ဖောက်သည်များနှင့်ကျွန်ုပ်တို့လွန်ခဲ့သောဆယ်စုနှစ်အတွက်တွန်းအားပေးခဲ့သောအသုံးအနှုန်းသုံးခုဖြစ်ပြီးနောက်ဆယ်စုနှစ်အတွက်ဆက်လက်တွန်းအားပေးလိမ့်မည်။ သင်၏နောက်လိုက်များအားတန်ဖိုးထားခြင်းသည်အလွန်အရေးကြီးသည်။ ငါမျှဝေခြင်းအတွက်မည်သည့်အချိုးအစားကိုမှမကြိုက်ဘူး၊ မင်းပရိသတ်နဲ့ပရိသတ်အတွက်တန်ဖိုးရှိရင်ဝေမျှပါ။
တစ် Cadence ဖွံ့ဖြိုး - သင်၏ပရိသတ်များနှင့်နောက်လိုက်များသည်သင့်ထံမှမကြာမီနှင့်မကြာခဏမွမ်းမံမှုများကိုမျှော်လင့်လိမ့်မည်။ သင့်ရဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုဝေမျှပြီးတန်ဖိုးထားတဲ့အတွက်လူမှုမီဒီယာဟာအရှိန်အဟုန်နဲ့ကစားတဲ့ဂိမ်းတစ်ခုဖြစ်တယ်။ ပထမ ဦး ဆုံးအသေးငယ်တဲ့ရှယ်ယာနှင့်သေးငယ်တဲ့ရှယ်ယာနှင့်အတူစိတ်ဓာတ်မကျပါနဲ့ ... ရုံမှာဆက်လက်လုပ်ဆောင်ခြင်းနှင့်အရှုံးမပေးပါနဲ့! အကယ်၍ သင်ရပ်တန့်သွားပါက - အကြောင်းပြချက်တစ်ခုခုကြောင့် - သင်ထပ်မံကျော်လွှားရမည့်သိသိသာသာကျဆင်းမှုတစ်ခုကိုမကြာခဏတွေ့လိမ့်မည်။
သင်၏လူမှုပြက္ခဒိန်ကိုစီစဉ်ပါ - သင့်လုပ်ငန်းအတွက်ရာသီအလိုက်ရှိသလား။ သင်၏လူမှုမီဒီယာပရိုဖိုင်းများသို့ backload လုပ်ရန်နှင့်အချိန်ဇယားဆွဲနိုင်သည့်သက်ဆိုင်ရာစာရင်းဇယားများရှိပါသလား။ သင်လတိုင်းသို့မဟုတ်အပတ်တိုင်းအွန်လိုင်းတွင်ပြောဆိုနိုင်သောခေါင်းစဉ်တစ်ခုကိုရွေးနိုင်ပါသလား။ သင်၏လူမှုပြက္ခဒိန်ကိုစီစဉ်ခြင်းသည်သင်၏လူမှုမီဒီယာအာဏာကိုကြီးထွားစေသောနည်းလမ်းကောင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်သင့်အားအနာဂတ်ကိုလှောင်ပြောင်ရန်နှင့်အတိတ်၏ရှေးဟောင်းသုတေသနများကိုသူတို့နှင့်သင်၌စွဲမြဲစေရန်ခွင့်ပြုသည်။
လှုပ်ရှားမှုခေါ်ရန်မမေ့ပါနှင့် - ၏ဥပဒေ အမြဲရောင်းပါ Social Media နှင့်အလုပ်လုပ်သည်မဟုတ်ပါ။ သို့သော် အမြဲတမ်း informin ဖြစ်လိမ့်မည်ဆပါဘူး! သင်၏ရည်မှန်းချက်မှာသင်၏ကွန်ယက်ကိုတန်ဖိုးထားပြီးအသိပေးရန်ဖြစ်သည်။ သင်၊ သင်၏ထုတ်ကုန်များနှင့် ၀ န်ဆောင်မှုများနှင့်ထိတွေ့ဆက်ဆံရန်နောက်တစ်ခါသူတို့ဘာလုပ်နိုင်သည်ကိုသူတို့ကိုမကြာခဏသတိပေးပါ။ Call-To-Action ကိုသင်၏လူမှုရေးပရိုဖိုင်းတွင်ထည့်သွင်းပါ၊ ၎င်းသည်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများကိုမောင်းနှင်ရန်အလွန်ကောင်းမွန်သော passive နည်းလမ်းတစ်ခုဖြစ်သည်။
ငါသင်ပေးခဲ့ကြပါလျှင် လူမှုမီဒီယာစျေးကွက် 101 အတန်းအစား၊ ဒီအချက်အလက်ဆိုင်ရာအချက်အလက်တွေမှာပျောက်နေတဲ့အဓိကကျတဲ့နည်းဗျူဟာအနည်းငယ်ကိုကျွန်တော်ထည့်ပေးမယ်။
ဂုဏ်သတင်းစောင့်ကြည့်မှု - ကြီးမြတ်သောဆိုရှယ်မီဒီယာစောင့်ကြည့်လေ့လာရေးကိရိယာကိုအသုံးပြုခြင်းဖြင့်သင်၏ထုတ်ကုန်များ၊ ၀ န်ဆောင်မှုများသို့မဟုတ်လူများအကြောင်းဆိုသောစကားကိုနားထောင်သင့်သည်။ အချိန်နှင့်တပြေးညီသတိပေးမှုများနှင့်မြန်ဆန်သောတုံ့ပြန်မှုများနှင့်ဆုံးဖြတ်ချက်များသည်အလွန်အရေးကြီးသည်။
လူမှုရေးထောက်လှမ်းရေး - ဆိုရှယ်မီဒီယာပေါ်တွင်ဆက်သွယ်ရေးသည်သင်၏ကုမ္ပဏီသတိထားသင့်သောသတင်းအချက်အလက်များစွာကိုပေးသည်။ အလားအလာရှိသောမေးခွန်းများ၊ ဖောက်သည်များ၏တုန့်ပြန်မှုနှင့်သတင်းအချက်အလက်ခေတ်ရေစီးကြောင်းသည်သင်၏စီးပွားရေးလုပ်ငန်းအပေါ်လုပ်ဆောင်ရန်တန်ဖိုးရှိသောထိုးထွင်းသိမြင်မှုကိုပေးနိုင်သည်။
ဧည့်ဝန်ဆောင်မှု - ယခုအခါယခင်ကထက်စားသုံးသူများနှင့်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများသည်လူမှုရေးလမ်းကြောင်းများမှတဆင့်သူတို့၏ဖောက်သည်ဝန်ဆောင်မှုတောင်းဆိုမှုများကိုကော်ပိုရေးရှင်းများတုံ့ပြန်ရန်မျှော်လင့်နေကြသည်။ ဆိုရှယ်မီဒီယာသည်အများပြည်သူဆိုင်ရာဖိုရမ်ဖြစ်သောကြောင့်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများသည်ဖောက်သည်ဝန်ဆောင်မှုပြissuesနာများကိုအခြားသူများကယင်းကိုပိုင်ဆိုင်မှုအဖြစ်ရှုမြင်ကြလိမ့်မည်။
ရည်မှန်းချက်များထားနှင့်စွမ်းဆောင်ရည် Monitor - အောက်ပါအတိုင်းလှုပ်ရှားမှုများ၊ ထိတွေ့ဆက်ဆံခြင်း၊ စိတ်ဓါတ်များနှင့်မျှဝေခြင်းတို့သည်မည်သည့်လမ်းကြောင်းကိုစောင့်ကြည့်သင့်သည်ဟူသော ဦး ဆောင်ညွှန်ကိန်းများဖြစ်သည်။ ဆိုရှယ်မီဒီယာသည်အသိပညာကိုမြှင့်တင်ပေးနိုင်ပြီးအသိပညာသည်အခွင့်အာဏာနှင့်ယုံကြည်မှုကိုမောင်းနှင်နိုင်သည်။ အာဏာပိုင်နှင့်ယုံကြည်မှုသည်ရှာဖွေရေးအင်ဂျင်အဆင့်ကိုလွှမ်းမိုးနိုင်သည်။ နှင့်အညီ, ဒီအရာအားလုံး retention, ဝယ်ယူခြင်းနှင့်ဖောက်သည်တန်ဖိုးတိုးမြှင့်ကဲ့သို့စီးပွားရေးရလဒ်များကိုမောင်းနိုင်ပါတယ်။
ဒီကနေ infographic Venngage ဆိုရှယ်မီဒီယာမှတစ်ဆင့်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးအတွက်နည်းဗျူဟာများချမှတ်ခြင်းနှင့်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ခြင်းအားဖြင့်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုလမ်းလျှောက်သည်။ ထိုအထူထောင်စျေးကွက်များအတွက်အဖြစ်ကောင်းစွာဒီမှာအချို့သောကောင်းသောအကြံပေးချက်များရှိပါတယ်!
Tags: ဧည့်ဝန်ဆောင်မှုစတင်ခဲ့သည်ဂုဏ်သတင်းစီမံခန့်ခွဲမှုဂုဏ်သတင်းစောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုခံစားချက်လူမှုရေးထောက်လှမ်းရေးလူမှုမီဒီယာလူမှုမီဒီယာဝယ်ယူလူမှုမီဒီယာရည်မှန်းချက်များဆိုရှယ်မီဒီယာစွမ်းဆောင်ရည်လူမှုမီဒီယာ retention ကိုဆိုရှယ်မီဒီယာနည်းဗျူဟာလူမှုမီဒီယာကိုစတင်ပါငရုတ်သီး
WordPress ရှိအမှားအယွင်း ၄၀၄ ခုကိုရှာဖွေခြင်း၊ စောင့်ကြည့်လေ့လာခြင်းနှင့်ပြန်ညွှန်းခြင်းအားဖြင့်ရှာဖွေခြင်းအဆင့်ကိုမည်သို့တိုးမြှင့်ရမည်နည်း
လူမှုမီဒီယာiverseာ - ၂၀၂၀ တွင်လူမှုရေးမီဒီယာပလက်ဖောင်းများကားအဘယ်နည်း။